यो भेलाको सम्पूर्ण टेक्स्ट Archives (विना सम्पादन) जस्ताको त्यस्तै हेर्न मिल्ने बनाएर यहाँ राखीएको छ । भेलाको सम्पूर्ण कार्यक्रम र वार्तालाप हेर्न सोही लिन्क पच्छाउनुहोला । उपर्युक्त पेजमा भेला सुरु हुनुभन्दा केही अघी देखीका वार्तालाप समावेस छ। सो भन्दा पछाडीको कुराकानीहरु हे्र्न पेजको माथी दायाँ पट्टी रहेको >Next दवाउदै अगाडी बढ्नु होला
दौंतरीमा अगस्ट १, २००९ मा प्रथम अन्तराष्ट्रिय ब्लगर भेला सम्पन्न भयो। उक्त भेलामा देश विदेश स्थीत ४० जना जति ब्लगरको सहभागीता भएको थियो।
भेलाको रुपरेखा यस प्रकार थियो:
- उद्घघाटन तथा झण्डोतोलन - ठरकी दादा बाट
- रा्ष्ट्रिय गान - सुजन शर्माबाट
- सभापतीत्व - बसन्त गौतम
- स्वागत मन्तव्य - दिलिप आचार्य
भेलाको निचोड यस प्रकार थियो:
१) डुब्लिकेट कपि, मल्टि कपी, चोरी लाइ दुरुस्ताहित गर्ने ।
२) ब्लगर ग्रुपको युजर इमेल nepali-bloggers@googlegroups.com तयार गर्ने । -तयार भयो अब तपाई आफै नै http://groups.google.com/group/nepali-bloggers लिंकमा गएर सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ।
३) नया ब्लगरलाइ प्रोत्शाहन गर्ने।
४) आजको भेलाको कपी दौंतरीमा राख्ने र बांकी एजेण्डाको बारेमा छलफल गर्ने। - टेक्ट एक महिनाको लागी उपल्ब्ध भैसकेकोक छ। अब कमेन्टबक्समा बहस गर्नुहोला।
यो भेला बाट आएका कुरा कसरी अगाडी बढाउने कमेन्ट बक्समा छलफल गर्नुहोला।
भेलाका अघि पछीका केही रोचक पक्षहरु:
भेलामा पालै पालो गरी जम्मा ४० जना ब्लगर र ८ जना पाठक साथीहरुको उपस्थिति थियो ।
भेला ठीक समयमा सुरु भएर तोकिएको समयमै समापन भएको थियो ।
भेला अबधिभर दौँतरीमा ३२१ आगन्तुक प्रवेश (वा दौँतरी मा ३२१ पटक क्लिक भएको) थियो ।
भेलमा जम्मा २५४७ मेसेज आदान-प्रदान भएका थिए ।
अर्काको ब्लगका सामाग्रीहरु कपि-पेष्ट गर्ने ब्लगरको ‘झाँको झार्ने’ कुरा हुँदा वातावरण निक्कै रमाईलो भएको थीयो ।
भेलाको अगी पछि गरेर भेलाको बारेमा ३९८७ मेसेज आदान- प्रदान भएको थीयो ।
केही सहभागीहरु काम, केही खाना त केही निन्द्रा छाडेर सहभागी भएका थिए ।
भेला अघि पछीका केहि रमाईला वाक्यांशहरु जस्ताको त्यस्तै:
Nepalean: ५ घन्टा देखी यो हेरको मेरो आंखा त गुच्चा जस्तो भाको छ ।
T-Dada: मेरो कम्प्युटरमा त मकै पडकेको जस्तो आबाज आएर मेसेज आउन थाल्यो ।
wordflows (guest): bomb ta padkeko chaina ni.
Basanta: बरु डण्डा खाईन्छ, तर झण्डा चाहिन्छ ।
ZeroHour (guest): हैन "क्रमभंग" गर्न भएन ।
sapanasansar (guest): दौतरी चोतारी मा भेला सकिएपछि पो उपस्थित भएछु जस्तो छ ।
sapanasansar (guest): बेदनाथ ज्यु को किन त्यस्तो भयो घर तिर भाउज्यु सुत्केरि हुनुहुन्थ्यो कि ?
BedNath (guest): hijo laptop ma problem aayer program install gardai thik bho ...ani aber sutiyo ...
भेलामा वाकाजीले एउटा मिठो कविता र गजल पनि राख्‍नु भएको थियो । कविता यहाँ जस्ताको त्यस्तै राखीएको छ:
निच्छल स्वच्छ पवित्र भाब बोकी
लम्कौ दौतरी हातेमालो गर्दै
भूगोलको कुना कुना पसी
छरौ मुस्कान आलोपालो गर्दै
सबै आफन्त सबै नेपाली
चढोस् सबमा सदभाबको लाली
मेची दुख्दा रोवोस महाकाली
जय नेपाल जय, नेपाली
(गजल भने कृपया आफ्नै नामबाट दौँतरीमा पोष्ट गर्नु होला वाकाजी)